WARBIXIN: Ciyaaryahanka qura ee uu Lionel Messi ka codsaday Funaanaddiisa, mid uu u diiday Maaliyaddiisa & Labada Laacib ee uu Leo ka qoomamaynayo inuusan ka codsan Maaliyadahoodii? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
July 29, 2021 at 16:07 WARBIXIN: Ciyaaryahanka qura ee uu Lionel Messi ka codsaday Funaanaddiisa, mid uu u diiday Maaliyaddiisa & Labada Laacib ee uu Leo ka qoomamaynayo inuusan ka codsan Maaliyadahoodii?2021-07-29T16:07:37+02:00 CAYAARAHA
(Barcelona) 29 Luulyo 2021. Warbixintaan waxaan kaga hadli doonnaa waa kuma ciyaaryahanka qura ee uu Lionel Messi ka codsaday funaanaddiisa intii uu ku soo jiray ciyaaraha iyo labada ciyaartooy ee uu Leo jeclaan lahaa in uu ka beddesho funaanadahooda, balse haatan uu ka qoomamaynayo inuusan ka codsan maaliyadahoodii?
Inta daawata kubadda cagta waxaa hubaal ah in aysan indhahooda saarin xiddigga kooxda Barcelona iyo xulka Argentina ee Lionel Messi oo ciyaaryahan ka soo horjeeda inta u tago weydiisanaya funaanad ama ku oranaya ‘hebeloow funaanaddaada ma isiin kartaa’ taa beddelkeedana waxaan mar walba aragnaa ciyaartooy ku tartamaysa inay Lionel Messi weydiistaan funaanaddiisa kolka ay ciyaaruhu dhammaadaan.
Tan iyo markii uu Lionel Messi noqday laacib ka tirsan safka hore ee kooxda Barcelona waxa uu ku dhaqmayay siyaasad ah in uusan marnaba funaanad weydiisan ciyaaryahan ka soo horjeeda, haddii ay iyagu weydiistaanna uu isagu go’aankeeda leeyahay in uu siiyo iyo in uu u diido, balse Messi ayaa sida uu dhowaan caddeeyay waxa uu sheegay in si gaar ah u ixtiraamo ciyaaryahannada reer Argentine oo haddii xiddig Argentine u dhashay uu ka dalbado funaanaddiisa uu durbadiiba u siibo.
Laakiin waxaa jirtay marar badan oo uu Lionel Messi jebiyay siyaasaddiisa funaanad bixinta iyo funaanad weydiisashada xiddigaha ka soo horjeeda, waxaana haddii Lionel Messi laga guuleysto yacnii haddii naadigiisa Barcelona laga badiyo waxaa Messi uu gebi ahaanba diidaa in uu funaanaddiisa siiyo ciyaartooy ka soo horjeeda sida dhacday kulankii Bayern Munich iyo Barcelona ee sanadkii hore ciyaartaas oo 8-2 lagu karbaashay Barcelona.
Markii kulankaasi uu dhammaaday waxaa Messi u yimid xiddig-yaraha kooxda Bayern Munich ee Alphonso Davies oo Messi weydiistay funaanadda, hase yeeshee nasiibdarro Leo waa uu diiday in uu funaanadda u bixiyo ciyaaryahan Alfonso.
“Haa, waxaan weydiistay Messi funaanaddiisa, laakiin ima siinin, waayo waxaan u malaynayaa inuu xoogaa careysnaa, laakiin laga yaabee in marka dambe uu i siiyo.” ayuu yiri Alphonso Davies oo 14-kii Agoosto la hadlayay Shabakadda BT Sport.
Warreysi gaar ah oo laba bilood ka hor uu wargeyska ‘Olé’ ee ka soo baxa waddanka Argentine la yeeshay ciyaaryahan Lionel Messi, xilligaas oo uu jaraa’idku u dabaal degayay sanad guuradii 25-aad ee ka soo wareegatay markii la aas-aasay ayaa waxa uu Lionel Messi kaga hadlay arrimo badan oo sir ah oo ku saabsan noloshiisa iyo xirfaddiisa ciyaareed.
Messi ayaa xusay in yaraantiisii uusan wax ahmiyad ah siin jirin xiddigaha ka soo horjeeda iyo funaanadaha ay ku ciyaaraan, balse haatan markii uu weynaaday, kuna dhowaaday da’da ciyaaraha looga fariisto uu ogaaday in uu arrintaa ku qaldanaa, ayna fiicnayd in uu aruursado funaanado badan si ay xusuus ugu noqoto marka uu ciyaaraha ka fariisto.
Waxaana Messi uu si gaar ah carrabka ugu dhuftay laba ciyaartooy oo uu ka qoomamaynayo in uusan weydiisan ama ka bedelan funaanadahoodii intii ay ciyaaraha ku jireen, kuwaas oo kala ah xiddigihii reer Brazil ee Ronaldo Luis Nazario iyo Roberto Carlos oo xilligaa u ciyaarayay kooxda Real Madrid oo ah mid ay aad u xafiltamaan Barcelona.
“Waxaan ka qoomamaynayaa in aan funaanadda ka beddelan waayo laacibiin caan ahaa sida Ronaldo iyo Roberto Carlos, haddii arrintaasi mar labaad la soo celin kari lahaana waxaan weydiisan lahaa funaanadahooda” ayuu yiri Messi oo ka hor tegay Ronaldo iyo Roberto Carlos kulammo El Classico ah waqtigaas oo ku aaddanayd billowgii waayaha ciyaareed ee Messi, halka Ronaldo iyo Roberto Carlosna ay ku jireen waqtiyadoodii ugu dambeeyay ee kubadda cagta.
Waxyaabaha kale ee uu ka dhawaajiyay ciyaaryahan Messi waxaa ka mid ah in uu jiro hal ciyaartooy oo qura kaas oo intuu toos ugu tegay Leo uu weydiistay funaanaddiisa tan iyo markii uu soo bilaabay ciyaaraha kooxda kubadda cagta Barcelona, halkaa xiddig ee uu Messi ka codsaday funaanaddiisa ayaana ah laacibkii hore ee naadiga Real Madrid iyo xulka Faransiiska ee Zinedine ZIdane.
Messi iyo Zidane waxa ay iska hor yimaadeen xilli ciyaareedkii 2005-2006, waqtigaas oo ahaa xilli ciyaareedkii labaad ee Lionel Messi iyo xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay ee Zizou u dheelay Real Madrid, waxaana dhammaadkii kulankii caanka ahaa ee El Classico ee 2005-tii ay isaga hor yimaadeen Real Madrid iyo Barcelona kaas oo 3-0 looga adkaaday Real Madrid uu ciyaaryahan Lionel Messi funaanadda weydiistay xiddiga reer Faransa ee Zidane.
Intaas waxaan ku soo koobaynaa warbixintii ka hadlaysay halkii ciyaaryahan ee abid uu ku dhiirraday Lionel Messi inuu funaanaddiisa ka codsado oo uu weydiisto, kaasoo ahaa Zinedine Zidane iyo weliba labadii laacib ee uu Lionel Messi ka qoomameeyo inuusan weydiisan funaanadahooda kuwaas oo iyagana kala ahaa Ronaldo Luis Nazario iyo Roberto Carlos.
« RASMI: Kooxda Real Madrid oo heshiis cusub ka saxiixatay Dani Carvajal… (Imise sano ayuu qalinka ugu duugay Los Blancos?)
Sawirro: Rooble iyo Boris Johnson oo saddex qodob oo muhiim ah ka wada hadlay »